Liyuuga oo boobay Raashin loo Qaybinayay dadka baahan ee Gaashaamo. | ogaden24
Liyuuga oo boobay Raashin loo Qaybinayay dadka baahan ee Gaashaamo.
Nov 25, 2016 - Aragtiyood
Wararka naga soo gaadhaya degmada Gaashaamo ee Gobolka Jarareed ayaa sheegay in maleeshiyada Liyuugu boobeen Raashin loo Qaybinayay dadka danyarta ah ee deegaamadoodii uga barakacay Abaarta ba’an ee kudhufatay.
Dadkani danyarta ah oo ladajiyay duleedka Galbeed ee magaalada isuguna Jiray dad Xoola dhaqata ah iyo dadkii Tuuloyinka kunoolaa, ayaa Lacago ay iska aruuriyeen Ganacsatada iyo dadka Ladan ee degmadu waxay ugu iibiyeen waxooga Raashin ah, balse koox katirsan maleeshiyada Liyuuga oo iyaga naftoodu baahan ayaa boobay Raashinkii masaakiinta” sida uu sheegay muwaadin kusugan magaalada oo Eheladiisa u dan sheeganayay.
Sida warku sheegayo maleeshiyadu waxaa ay dhaceen kala badh Raashinka waxaana muran ba’an uu dhex maray Horjoogayaasha maleeshiyada iyo maamulka degmada oo ay weheliyaan saraakiisha ciidanka Woyanaha ee degmada Gaashaamo fadhiisinka kuleh.
Maleeshiyada Raashinka boobtay oo fadhiisin ciidan kuleh Tuuloyinka dhaca xadka Ogadenia iyo Somaaliya ayaa lagu soo waramayaa inaysan bilihii lasoo dhaafay Helin saad ku filan iyo mushaar-toona, waxayna inta badan noloshooda ku dabaraan Hantida ay ku boobaan shacabka kudhaqan deegaamada ay kahawlgalaan.